I-Ballerinas, isicathulo esikahle sokujaha izinsuku ezinelanga | Bezzia
UMaria vazquez | 11/10/2021 18:00 | Ngigqokani, Izicathulo
Abadansi bamunye okunye okuhle ngesikhathi sekhefu ukuqedela izingubo zethu. Njengama-moccasins, esikhulume ngawo muva nje, lezi zicathulo ezicaba zisinikeza induduzo enkulu osukwini lwethu nosuku.
Ngezinsuku ezishisa kakhulu sisengakwazi ukugqoka abadansi bethu ngezinyawo ezingenalutho. Yize, ngaphambi kokuzikhipha ekhabethe, kuzoba yinto evamile ngathi ukuthi sizisebenzise ngamasokisi amancane. Futhi ukuqedela zonke izinhlobo zokugqoka, ngama-jeans aphrintiwe, amalokwe noma iziketi.
Abadansi bangama- izicathulo ezilula nezikhululekile. Okungenani iningi, ngaphandle kwamamodeli angenaso isithende esincane. Lokhu akukhona okunconyelwa kakhulu ukuhamba amabanga amade, noma kunjalo kushiwo okufanayo ngamaflip-flops futhi kukhona labo abangahamba umhlaba wonke nabo. Kepha masingaphambuki.
Ngemibala engathathi hlangothi futhi enqunu, Abadansi baba umlingani osebenzisekayo ukuqedela izingubo zethu. Siyabathanda enamajini nejazi elide noma ijazi lemvula, inhlanganisela engaphandle komgwaqo engasebenza amahora angama-24 ngosuku. Ungakhetha futhi ihembe elisikiwe kanye nesethi ye-cardigan, efanelekile ngalesi sikhathi sonyaka.
Uma kukhona umuntu owazi ukusebenzisa kabi le nhlanganisela ngokuphelele, kunjalo Anouk Yve, ozogula ngokubona izingubo zakhe eBezzia. Ungavuma okuncane noma okuncane kokuthandayo naye kepha ungumthombo omuhle wokhuthazo uma kukhulunywa dala izingubo eziyisisekelo usuku lwethu lwanamuhla.
Ungahlanganisa nabadansi nge izingubo ezinamaphethini neziketi, ukufeza isitayela esinemimoya yothando efana naleyo Van y UMaria Ruiz. Uzodinga kuphela i-blazer noma i-cardigan kumathoni angathathi hlangothi ukuqedela ukubukeka kwakho. Ngabe ufuna okuthile okuhlelekile futhi okuyingozi? UJenny Walton unokhiye. Dare ngesiketi esibe nombala onesibindi bese usihlanganisa ne-ballerinas ehlukile, ngeke ungaboni!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » I-Ballerinas, isicathulo esikahle sokujaha izinsuku ezinelanga
Imibono yokuhlobisa ikhaya lakho ngopiyano olukhulu